ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးဌာနအသစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံ? - Yangon Media Group
ကချင်ြ့ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးဌာနအသစ်တစ်ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ကန့်ကွက်သူ များ ပြားသောကြောင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဝန်ကြီးဌာနအသစ် တိုးချဲ့ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ပေးပို့လာ သော သဝဏ်လွှာအား ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြု နိုင်ရန် ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်က လျှို့ဝှက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ကန့်ကွက်မဲများခဲ့သောကြောင့် အတည်မပြု နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တနိုင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ဝင်းက ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခု တိုးလာလျှင် ဝန်ကြီးတစ်ဦးတိုးလာမည်ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတော် ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုအသုံးပြုလာနိုင်ကြောင်း၊ လက်ရှိဝန်ကြီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကြောင့်လား၊ အလုပ်ကိစ္စအလွန်များသော ကြောင့် နားချိန်မရှိ၍ အထက် အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြထားပြီလား ဟူ၍ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ အခက်အခဲများမရှိလျှင် လက်ရှိဝန်ကြီးတစ်ဦးတည်း စွမ်း ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဆိုကို ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးကြရာ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၄၆ ဦးတွင် ကန့်ကွက်မဲ ၂၈ မဲ၊ ထောက်ခံမဲ ၁၈ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ကန့်ကွက်မဲများခဲ့သော ကြောင့် အဆိုပါ အဆိုအား လွှတ် တော်က အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ မူလဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုဖြစ် သော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနအား လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခုခွဲ၍ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလို သောကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ သဝဏ်လွှာပေးပို့ပြီး အတည်ပြု ပေးပါရန် အဆို တင်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင်ရှိသော ဝန်ကြီးဌာနများမှာလုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်း နှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှု လက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန၊လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗမာတိုင်း ရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ လီဆူတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ ရဝမ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန် ကြီးဌာနများရှိကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်စည်ပင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံရန် ကော်မတီဝင် အဆင့် ၂၇ ဦးနှင့် မြို့နယ??
စင်ကာပူတိုက်ကွမ်ဒိုချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာအဖွဲ့ ဆုတံဆိပ်ငါးခု ဆွတ်ခူး